कर्णाली प्रदेशको अर्थ समितिद्वारा विकासे आयोजना निरीक्षण - नेपालबहस
| १७:०६:०८ मा प्रकाशित
२७ फाल्गुण, काठमाडौं । प्रदेश मताहात रहेका कार्यालयले अघिल्लो वर्ष जिल्लामा गरेका कामको अनुगमन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशसभाको अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सोमबार र आज अनुगमन गरेको हो । समितिका सभापति अमरबहादुर थापा, सदस्य वीरबहादुर शाहीलगायतको टोलीद्वारा जिल्लाका पूर्वी क्षेत्रमा रहेका विकासका आयोजनाको निरीक्षण गरिएको हो ।
प्रदेश मातहत कार्यालयबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भए, गरेका कामको निरीक्षण तथा अनुगमन गरिएको छ । सम्पन्न भनि बजेट भुक्तानी दिइसकेका विकास निर्माणका काममा अनियमितता भएको गुनासो बढेपछि समितिको टोलीले अनुगमन गरेको सभापति थापाले बताए । उनले भने, “प्रदेशबाट वितरण गरिएका सबै कार्यक्रम वितरणमुखी भएको र हुने खानेले मात्र पाएको बुझियो ।” समितिले खानेपानी, सिँचाइ, सडक, कृषिबाली अन्य व्यवसायको अनुगमन गरेको थियो । पूर्वी क्षेत्रमा मात्र दुई दर्जन अयोजना सम्पन्न भएका भनि प्रदेशका कार्यालयले भुक्तानी गरेका थिए ।
त्यस्तै समितिका सदस्य शाहीले भने, “सबै काम खराब भन्न त मिल्दैन, केही कुरामा बदमासी भएको रहेछ, हामी तुरुन्तै सच्याउनका लागि ताकेता गछौँ, यदि समाधान भएन भने त्यसको परिणाम महँगो हुने छ ।” जिल्ला सदरमुकाममा तत्कालीन घरेलु कार्यालयबाट वितरण गरिएका भनिएको अधिकांश सामग्री पुराना भएको तर बिल मात्र नयाँ प्रयोग भएको पाइएको समितिका सभापति थापाले जानकारी दिए ।
बोटलर्स नेपाल (तराई) कम्पनी र रू रू जलविद्युतको सर्किट लेबलमा कारोबार, प्रतिशेयरमूल्य कति ? ३ दिन पहिले
जलविद्युत् आयोजनाद्धारा सिलिण्डर हस्तान्तरण ५ दिन पहिले
सम्पदा संरक्षणमा तनहुँका स्थानीय तह २ हप्ता पहिले
प्रधानमन्त्री ओलीले यही २७ गते संसदबाट विश्वासको मत लिने २ हप्ता पहिले
टेलिफोनको तार चोरी गरेको आरोपमा किशोरसहित दुई व्यक्ति पक्राउ ३ हप्ता पहिले
मन्त्रालयले भन्यो, अक्सिजनका खाली सिलिण्डर उपलब्ध गराउनु १ हप्ता पहिले
नेपालबहस समाचार प्रभाव : राष्ट्र बैंककी निर्देशक रिजाल पक्राउ १ महिना पहिले
सीमासम्म आएर भारतीय क्वारेन्टाइनमा बसेका एक नेपालीको मृत्यु ! १२ महिना पहिले
कांग्रेस युवानेता भण्डारीले मागे प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा १२ महिना पहिले
दाङमा रु एक करोड लगानीमा अत्याधुनिक सर्पदंश उपचार केन्द्र १० महिना पहिले